Articles Published in April, 2019 | Sagal Radio Services
Madaxweynaha dalka Algeria oo ku dhawaaqay inuu is casilay iyo dabaal degyo bilowday
Sagal Radio Services • News Report • April 2, 2019
Madaxweynihii Algeria Abdiaziz Bouteflika ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka Madaxweynenimo oo uu soo hayay 20-kii sano ee la soo dhaafay.
Cadnaan Cismaan Boqore oo ku guuleystey doorasho ka dhacday Muqdisho
Wiil uu dhalay allaha unaxarisitee Cismaan Cilmi Boqore ayaa ku guuleystey doorasho ka dhacday maanta magaalada Muqdisho taasoo loogu tartamayay kursiga uu baneeyay Marxuum Boqore.
Gaari Booyad ah oo la sheegay in Al-Shabaab ku diyaarinayeen qaraxyo oo lagu qabtay deegaanka Sabiib
Wararka laga helayo deegaanka Sabiib ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in Ciidamada xoogga dalka ee shalay la wareegay deegaankaas ay qabteen gaari booyad ah oo lagu diyaarinayay qaraxyo.
Taliska Booliska oo shaaciyay in gaadiid qarax laga soo buuxiyay uu ku jiro Muqdisho
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku jiro magaalada Muqdisho.
Sagal Radio Services • News Report • April 4, 2019
Qarax xooggan ayaa goor dhow oo fiidnimada caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo jugtiisa laga maqlay magaalada oo dhan.
Faahfaahin: Dad shacab ah oo khasaare ka soo gaaray howlgal ka dhacay Shabeellaha Hoose
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal ay Sh/Hoose xalay ka fuliyeen Ciidamo Mareykan iyo Ciidamo Soomaali ah, kaasoo khasaare uu ka soo gaaray dad Shacab ah.
Guddoomiye cusub oo loo magacaabay Bankiga Dhexe ee Soomaaliya
Xukuumadda Soomaaliya ayaa Guddoomiye cusub u magacawday Bankiga Dhexe ee Soomaaliya, kaddib markii ay dhamaatay mudadii xil heynta aheyd Guddoomiyihii hore ee Bankiga Dhexe.
Kulankii Baarlamaanka oo buuq iyo fowdo ku soo dhamaaday
Sagal Radio Services • News Report • April 6, 2019
Kulankii Baarlamaanka ee maanta loo balansanaa in looga doodo arrimaha ammaanka ayaa buuq iyo fowdo ku soo dhamaaday, kaddib markii uu is qabqabsi ka dhashay codeyntii Saxaafadda ee banaanka loo saaray kulanka.